Welcome kuti Our chitoro!
goodyear Welt kuvaka chengetedzo shangu
PVC mvura majombo
Chii basa kaviri sepasi the basa shangu?
Mune wemishonga magetsi shangu yega zvinhu, miviri yega rava kupfuura nyore uye chinetso. Kudzivirirwa haizovi kunokwanisika kuburikidza kusakara nemishonga uye Anti-pitikoti chokupika ari outsole, izvo akaona nechiedza uye akapfava zvechadenga midsole. Comfort kana kufamba.
Kubva panguva iyi maonero, magetsi yakanakisisa wemishonga ndiye RU / PU, uchishandisa rabha (RU) kuti outsole, polyurethane (PU) sezvo midsole, uye ipapo kuburikidza namira kana zvemakemikari Muitiro unobatanidza kushanda uye Muitiro unobatanidza mashandiro PU pachayo zvisungo kuti outsole kusvika midsole. Chokwadi, chokunze sepasi the shangu kunogonawo kukwenenzverwa, yakabwinyiswa, uye wakavezwa.
Panewo wemishonga bedzi zvinhu, kureva PU / TPU (polyurethane / thermoplastic polyurethane). Zviri hwomutambarakede kupfeka. Uyezve, kushandisa thermoplastic polyurethane kuti outsole asangana nezvinodiwa wepanguva vagadziri, nokuti sole chakaitwa TPU zvinogona mavara sole, uye kuvesa rikurumidze pamusoro sole zvinogonawo zvakasiyana.
Chimwe kaviri rukoko sole chakaitwa PU / PU (polyurethane / polyurethane) zvinhu mubatanidzwa, kuti outsole uye midsole wakaumbwa polyurethane. Nokuti outsole, zvikurukuru gobvu polyurethane zvinhu zvinofanira kushandiswa chokuchengeta kusakara kurwisa zvechadenga outsole. Nokuti midsole, foamed polyurethane kunofanira kusarudzwa kunyaradzwa.
Post nguva: Dec-24-2018
NO.7555 pamusoro Xingyuan mumugwagwa, Zhanglu, Gaomi guta,
Weifang guta, Shandong dunhu, China